Nweta ọrụ: Denmark na -agwa ndị kwabatara ka ha rụọ ọrụ maka uru ọdịmma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Denmark na -agbasa akụkọ » Nweta ọrụ: Denmark na -agwa ndị kwabatara ka ha rụọ ọrụ maka uru ọdịmma
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • omenala • Denmark na -agbasa akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Gọọmentị Denmark kwuru na isii n'ime ụmụ nwanyị iri si Turkey, North Africa na Middle East anaghị arụ ọrụ.
A ga -achọ ndị na -akwaga mba ọzọ ka ha nweta ọrụ iji nweta uru na Denmark.
Iwu ọhụrụ ga -enyere ndị na -akwaga mba ọzọ aka ịbanye na obodo Denmark.
Isii n'ime ụmụ nwanyị 'kwagara mba ọdịda anyanwụ' iri na Denmark anaghị arụ ọrụ.
A ga-achọ ndị na-akwaga mba ọzọ na Denmark ịrụ ọrụ opekata mpe awa 37 n'izu ka ha tozuo maka uru ọdịmma gọọmentị nyere.
Prime Minista Denmark Mette Frederiksen
A ga -amachibido mmachi ọhụrụ a na ndị na -enweta uru ọdịmma n'aka gọọmentị Denmark afọ atọ ma ọ bụ anọ, mana ndị na -enwetabeghị ọkwa ntozu nke Danish.
PM kwuru, "N'ime ọtụtụ afọ, anyị emela ọtụtụ mmadụ ihe ọjọọ site n'ịchọghị ihe ọ bụla n'aka ha," PM kwuru, onye gbakwụnyere na iwu ndị a bụ maka ụmụ nwanyị na -akwaga mba ọzọ na -erite uru, ndị na -anaghị arụ ọrụ ma na -arụ ọrụ. sitere na nzụlite 'na-abụghị ọdịda anyanwụ'.
Frederiksen kwuru, "Ọ bụ isi nsogbu mgbe anyị nwere ụdị akụ na ụba siri ike, ebe ndị ọchụnta ego na-achọ ọrụ, na anyị nwere nnukwu otu, ọkachasị ụmụ nwanyị nwere nzụlite na-abụghị ndị ọdịda anyanwụ, ndị na-esoghị n'ahịa ọrụ."
Denmark nwere otu n'ime ọnọdụ siri ike na mbata na ọpụpụ n'ime European Union (EU).
N'ọnwa June, ọ gafere iwu site na ntuli aka 70-24, na-enye ya ohere ịchụpụ ndị na-achọ ebe mgbaba na ịhazi ngwa mgbe ha nọ na mpụga obodo.
Chiiz free mmiri ara ehi ọhụrụ: Microalgae mbụ dabere
Sandals Resorts ugbu a na-agba ụbọchị 40 nke inye onyinye maka…